7 Ff Beautiful Water Beautifulf f N’atu mmiri na Yurop | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Ff Beautiful Water Beautifulf f N’atu mmiri na Yurop
(Emelitere ikpeazụ On: 11/04/2021)
Toga Europe na njem laghachi azụ na oge nnukwu obí eze dị, ọhịa, na agwa mara mma na mmiri iyi. Ma ị na-aga Italytali ma ọ bụ Switzerland, na-eme atụmatụ a 2 Njem njem ọnwa, ma ọ bụ naanị nwee otu izu maka otu mba Europe, must ga-ewepụta oge iji nyocha 1 nke ọmarịcha ọdọ mmiri ndị dị na Europe, depụtara na anyị 7 Kacha mma waterfalls na Europe.
1. Fzọ Beautifulzọ Isi Mara Mma N’obodo kacha niile: Mmiri Marmore, Italy
Mmiri mmiri Marmore ruru 165 m na tallest nke 3 na ịdị elu nke 85 m. Ya mere, mmiri kachasị asọpụ mmadụ mere na Europe bụ ite mmiri Marmore. This breathtaking waterfall is Located in the heart of the Umbria region and was created by ancient Romans.
A na-eji ụgbọ okporo ígwè si Rome Termini gaa Ternii na-acha ọcha na-acha ọcha na mmiri iyi ọtụtụ mmiri.. Insgbọ oloko na-aga Terni na-agakarị ma ụgbọ oloko na-apụ kwa awa. Mgbe i rutere n’ọdụ ụgbọ oloko Terni, enwere ụgbọ ala nke nwere ike iburu gị na nsụda mmiri. There is an entrance fee to the waterfalls.
Otú ọ dị, na Trenitalia ụgbọ okporo ígwè tiketi ị nweta ego na nke ahụ bụ uru ọzọ maka njem ụgbọ okporo ígwè gaa Marmore waterfalls:)
Obere ntule sitere na anyị nye gị, enwere nnukwu ụlọ oriri n'akụkụ mmiri nke Marmore, mana anyị na-akwado oke ijide ihe panini na-aga na Da Panzerotto. Inwe a picnic na ebe dị jụụ site na nsụda mmiri dị mma karịa ahụmịhe ndị njem.
Rome na Terni tiketi
2. Mmiri Geothermal, Italy
Waterzọ ọmarịcha mmiri ndị foto na intali bụ Italy Waterfallmal bụ obodo nta Di Saturnia. Odikwa na Tuscany, Mmiri iyi Saturnia bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma ikuku iyi ebighi ebi na Europe. Obere obodo a bụ ebe nnukwu iyi na-ekpo ọkụ site na oge ndị Rom. Oge ezumike Tuscany gị agaghị ezu ezu na-enweghị ụbọchị na mmiri iyi ọkụ Saturnia. Isi iyi ndị ahụ dị mma maka ntụrụndụ mgbe ha gafesịrị ọmarịcha isi iyi ndị ọzọ dị nso, Mill, na ọdịda nke Gorello.
Satzọ mmiri Saturnia dị ịtụnanya bụ ụgbọ okporo ígwè ne din de Rome. First, ị na-aga ụgbọ oloko na Orbetello-Monte Arg. ma site ebe ahụ ị nwere ike iji ụgbọ ala ma ọ bụ tagzi rute mmiri ndị mara mma, ha niile erughị 3 awa site na Rome.
Rome na Orbetello Monte Argentario tiketi
Genoa na Florence Ụgbọ oloko
Sestri Levante ka Rome Ụgbọ oloko
Parma na Florence Ụgbọ oloko
3. Fzọ Beautifulzọ Isi Mara Mma N’obodo kacha niile: Mmiri Rhine, Switzerland
N'ilebanye anya na Worth Castle na Schloss Laufen, Mmiri iyi ndị a na-asọ asọ bu otu n'ime ebe iyi na-asọ asọ na Europe. Ke akpa ilekiri, Mmiri rhine yiri ka ọ dị mkpụmkpụ, mana ha sara mbara. Ga - enwe ike ịchọpụta ọmarịcha mmiri ndị a na ebube ha niile site na ụgbọ mmiri na-agba n’ime osimiri.
Ọ kachasị mma ileta mmiri iyi Rhine n'oge ọkọchị mgbe ice gbazere ma ihe niile gbara gburugburu bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Mmiri Rhine bụ 50 nkeji ụgbọ okporo ígwè pụọ Zurich na e nwere n'ezie abụọ ụgbọ okporo ígwè na abụọ nke waterfalls. Ya mere, Ọ dị mfe ịga na mmiri iyi ndị dị ịtụnanya maka ezinụlọ na solo njem.
Berlin na Zurich Train tiketi
Basel to Zurich Train tiketi
Tiketi Vienna na Zurich Train
4. Ublọ Staubbach, Switzerland
Ilefe obodo mara mma anya, Mmiri mmiri Staubbach na ndagwurugwu Lauterbrunnen na Switzerland dị ebube. Ihe nkiri gbara gburugburu ide mmiri a toro ogologo yiri eserese ịhụnanya. Enwere 72 isi iyi na ndagwurugwu Lauterbrunnen, ma n’enweghị mgbagha, Mmiri staubbach bụ ihe nkiri kachasị mara mma na nke ịhụnanya ha niile. N'oge opupu ihe ubi, ndagwurugwu ahụ na-adị ndụ na ọmarịcha agba na ihu igwe dị mma na-enye ohere ịga njem na ịchọgharị mpaghara ahụ.
Somefọdụ na-ekwu na ndagwurugwu Switzerland a kpaliri J.R.R Tolkein's novel Rivendell, O nwere ike ịbụ na ọ nọrọ na obere obodo ma nwee mmasị n'okporo ụzọ dị n'otu ebe ị na-a itsụ mmiri si dị n'ụkwụ ya.
Stefbach afụ mmiri dị nso na obodo Bern ma ị nwere ike ịga ndagwurugwu Lauterbrunnen n'ihe na-erughị 3 awa site na ụgbọ oloko si Lucerne ma ọ bụ erughị 4 awa site na Geneva. Site na ọdụ ụgbọ oloko, ide mmiri ahụ bụ ihe eji aga ebe ị ga - achọ ịgafe etiti obodo.
Lucerne na tiketi Lauterbrunnen
Geneve na tiketi Lauterbrunnen
Lucerne na Interlaken tiketi
Zurich na Interlaken tiketi
5. Fzọ Beautifulzọ Isi Mara Mma N’obodo kacha niile: Stuibenfall, Tyrol, Austria
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya gabigara ókè ma chọọ ihe mara mma mara mma, ị ga - ahụ n'anya mmiri Stuibenfall nke mbu na Tyrol. Àkwà mmiri na-akwụsịtụ na ụlọ elu ndị na-agba gburugburu na-eme ka mkpọda gaa na mmiri iyi a dị ịtụnanya na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali. Terol kachasị ogologo na mmiri kachasị ukwuu bụ 2.4km, yabụ ị nwere ike inyocha ya n’ụbọchị njem njem. The hiking nzọ ụkwụ bido ma mechaa n’ebe a na-adọba ụgbọala n’obodo Umhausen.
Are ga-ezute ọtụtụ ndị njem na ndị njem njem n’ụzọ, yabụ echegbula onwe gị maka owu na-ama gị.
Munich bụ naanị 3 awa maka ụgbọ oloko si Stuibenfall. Ya mere, nke a pụtara na ị ga - enwe ike ịgbanarị maka ngwụsị izu site na obodo a na-eme ihe ike gaa n'otu n'ime ọdọ mmiri kachasị mma na Europe. Ya mere, the ga-anụ ụtọ ma obodo ma Munich n'oge ezumike mmiri gị na Europe.
6. Rimzọ Krimml, Austria
Odikwa na Austria ogige ntụrụndụ mba kachasị ukwuu, Ugbo elu nke Tauern National Park, nsụda mmiri nke Krimmeta bụ ide mmiri atọ, eru 1490 m na ịdị elu na 380 elu. Oke ohia mgbe ochie, fauna, mgbada uhie, ugo ọlaedo bụ mmadụ ole na ole n’ime ndị bi n’ogige ahụ nke nwere ike iso gị gafere ụzọ ị ga-aga na nsụda mmiri ọzọ dị ịtụnanya na Europe.. Ọ bụrụ na ị na-a maa ụlọikwuu enthusiast na ahụmahụ hiker, ogige ntụrụndụ a na ebe mmiri Krimml ga-abụ njem na-agaghị echefu echefu na ugwu ndị dị na Austria.
Ihe nkiri dị n'akụkụ iyi mmiri ahụ bụ ihe pụrụ iche na oge opupu ihe ubi mgbe snow agbazere mgbe mmiri Krimml na-awụpụ., ụmụ nnụnụ na-abụ abụ na ọmarịcha anụ ụlọ ndị mara mma na-eteta mgbe ogologo oge oyi gachara.
You nwere ike ịnya ma ọ bụ iri a ụgbọ okporo ígwè & ụgbọ ala Krimml waterfalls. Njem a erughị 3 elekere si Salzburg ma ọ bụghị oge ị ga-aga ije na paradaịs Austria.
Munich na tiketi Innsbruck
Salzburg na tiketi Innsbruck
Oberstdorf na tiketi Innsbruck
Graz na tiketi Innsbruck
7. Mmiri Gavarnie, France
Nọ na ndagwurugwu ahịhịa ndụ juru, mmiri dị elu nke Gavarnie dị na France bụ 422 mita dị elu ma bụrụ onye a ma ama n'etiti ndị njem. Site na nlele nke Hautes Pyrenees, ndagwurugwu Gavarnie bụ ma ihunanya na nke zuru oke maka ndị njem siri ike na-achọ inyocha na imeri Pyrenees French. Gavarnie nsị mmiri bụ naanị 40 Nkeji oge si na obodo Gavarnie.
Ọmarịcha ọdọ mmiri ndị ahụ dị n'agbata France na Spain na Pyrenees dị egwu ma naanị 4 awa iji ụgbọ oloko pụọ na Toulouse.
Europe bụ ebe nrọ na-aga maka ndị njem na ndị ezinụlọ. Ọ dị mfe iji gafee Europe na ọmarịcha mmiri iyi niile dị na listi anyị nwere ike inweta ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala, maka njem ụbọchị ma ọ bụ maa ụlọikwuu, maka ndị njem ma ọ bụ ndị mbido nwere ahụike na-enwe ọhụụ na ịchọpụta ihe kachasị mma na Europe.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ oloko kachasị ọnụ na ụzọ ị ga - eji abanye ọmarịcha ọwa mmiri ọ bụla.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Ff Beautiful Water Beautifulf f N’atu mmiri na Yurop” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-waterfalls-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ma inwere ike dochie tr ka pl ma obu nl na otutu asusu ndi ichoro.